I-OllieBlake Rock Cottage, Tuxedo, N.C. - I-Airbnb
I-OllieBlake Rock Cottage, Tuxedo, N.C.
Ibekwe enhliziyweni ye-Tuxedo, NC, leli cottage lomfula obukekayo lihlinzeka ngenhlanganisela yezitayela ze-Appalachian ezisezingeni eliphakeme nezakudala ezihlanganisa negumbi lokulala eliphakeme w/umbhede wendlovukazi nokugeza okuhhafu, amagumbi okulala ayi-2 engeziwe (1 w/ umbhede ongusayizi ogcwele 1 w / umbhede wamawele, kufaka phakathi i-trundle), igumbi lokuhlala, indlu yokugezela yomndeni w / ubhavu ophelele / ishawa kanye nekhishi elibanzi. Leli yikhaya OKUNGAGQIYO/OKUVAPING, elinempahla yekhishi eyisisekelo namalayini. Sidinga idiphozithi yezilwane ezifuywayo engu-$25. *Amaminithi ukuya ku-Tryon ne-AVL*
Uzokwazi ukufinyelela ku-cottage egcwele kanye negceke elizungezile. Ukupaka kuyatholakala esizeni. Uzoba ne-grill yamalahle kanye nomgodi womlilo otholakalayo ukuze upheke ngaphandle futhi uziphumulele.
Siseduze nazo zonke izindawo ze-WNC kanye ne-Upstate SC. Amaminithi ukusuka e-Tryon, Flat Rock, Salada, Hendersonville, nase-Asheville. ILake Summit, iyindawo emfishane yokufinyelela emphakathini ukubhukuda nokuhamba ngezikebhe. Sitholakala kude ne-Mt. Olivet Rd, umgwaqo odumile wamabhayisikili. SIYAYITHANDA IMINDENI YEKHEMPU! Siseduze nawo wonke amakamu ehlobo endaweni.
Sisasele imizuzu embalwa ngakho-ke uma unezidingo, sicela usithumelele umyalezo ngohlelo lokusebenza lwe-Air BNB.